MAXAA KAA HORTAAGAN IN RIYADAADU KUU RUMOWDO. | shumis.net
Home » galmada » MAXAA KAA HORTAAGAN IN RIYADAADU KUU RUMOWDO.
MAXAA KAA HORTAAGAN IN RIYADAADU KUU RUMOWDO.
Aadahanu ka siman hamiga sare, waana sababtaan uga simanahay riyooyin iyo himilooyin qurxoon. Tusaale ahaan helida cilmi, shaqo wanaagsan, qoys wanaagsan, noqoshada daaci, qoraa, taajir, siyaasi, qof caan ah amaba dunida waxbadan ka arakoba.
Miday doontoba ha ahaatee, inta badan bulshadeenu uma rumawdo riyooyinkaasi waxay ahaadaan uun dhalanteed aan daawano aanse la gaadhin. Sababtu ma cada, balse aan is waydiino, maxaa inaga khaldan? tolow ma wakhtigaan ina saacidayn, ma dhulkii riyooyinkaynaan joogin, ma inaan guuldaraysanaan ka baqaynaa, ma cabsi kalaa inagu jirta, ma cid kalaan rabnaa inay inay dabada inaga riixdo oo keligeen isma wadi karno, ma wakhtigeedi baanay ahayn oo weli cimri kaama tegin baad isku maaweelinaa khaasatan dhalinyarada? Waase hubaal in qof kasta oo inaga mid ahi jecel yahay inuu rumeeyo himilooyinkiisa, uuna ugu jecelyahay inuu midhaha ku gurto gacmihiisa – tan waa midaan dhamaanteen ku hamiyeyno.
Inaad gaadho himiladaada waa halgan ka bilaabma ka go’naansho, dhiiranaan iyo inaan aamino inaan gaadhi karno kuna darto ficilkeed, Allena talo saarano. Waa inaan lahaano u samirkeeda, aynaan ka niyad jabin rumaynta riyadaada si kasta oo ay u muuqato mid adag amaba qadhaadh gaadhideedu.
Waxaana u daliil ah murtidan Cismaan Fasal inoo hibeeyey;
Dunidaaba kala dhiman,
Dar Allayba qabyo u tahay
Deddaal oo ka sii badi,
Dacar yaanay kugu noqon
Noloshu waa imtixaan, guuldaraduna waa sunaha nolosha, ma jiro wax kuu damaanad qaadi inaad mar kasta guulaysatid. Guul daraduna maaha inay kugu noqoto wax kaa hor istaaga himilooyinkaaga.
Ogolow in wax ka baratid guuldaradaada, horena uga socotid intaad ka guulaysaysid. Markaad kuftobaha hadaad kacdo waa hubaal guusha inaad gaadhayso ugu danbaynta, guusha aad dhibta u soo martaana waxay kuu samayn dhadhan aad u macaan. Waana halka gabyaagii waynaa Xaaji Aadan Afqalooc AHN uu ku lahaa gabaygiisa Tabaalaha bini’aadamka;
Ninka hawd qadhaabka u tagee tiigsadaa yicibta
Mid ku taabo yadhi waxa ku muda toban falaadhoodh’e
Malab kalama tago nimaan shinidu tiimbin miciyaa’e
Timir aan geed qodxa leh loogu bixin taa ninaba waaye
Tan macaan adoo dacar cunaad tacab ku gaadhaa’e
Taariikhdu siday xusto Abraham Lincoln, madaxwaynihii 16aad ee Maraykanka wuxuu ka dhashay qoys faqiira, waxbarashona muu gelin aan ka ahayn inuu isagu wax is baray, wakhtigiisina waxa uu noqday madaxwaynihii baabiyey adoonsigii dadka madowga ahaa. Waxay ahayd riyadiisa, wuuna rumeeyey.
Sidoo kale dadbadan oon xaga teknoolajiyada aan uga danbayno ayaa noloshooda meel hoose ka bilaabay tusaale ahaan Steve Jobs-kii Apple, Jack Ma oo aasaasay shirkada Alibaba iyo Chung Ju-yung oo hindisay gawaadhida hyundai.
Adna markaa maxaa kaa horjooga inaan wax la mida amaba ka waynba hindisto? Jawaabtu waa hadba sidaad u fekeraysid.
Haddii maskaxdaadu qudha ka fekerto inta indhaagu arkaan waxaa hubaal ah riyadaaduna halkaas ku koobmi. Hadiise aragtidaadu intaas ka dheertahay, si dhab ahna u isticmaashid maskaxdaada, maxsuulku wuu ku farxad gelin. Waxaadna noqon kartaa qof lagu daydo.
Hadaan eegno saxaraha carabta, waxaa ka baxda timirta. Timirtu waxay ka baxdaa dhul biyuhu ku yaryihiin, cimiladiisu aad u kulushahay, dabaylo xad dhaaf oo qalalan ka dhacaan, habeenkiina qabow saa’id ahi ka dhacdo. Iyadoo ay sidaas tahay ayay hadana kortaa oo midho dhashaa xiligaas adag. Si la mid ah, inaguna marka duruufta nololeed adagtahay, caqabadaha inagu gedaaman badanyihiin ayay tahay hadafyadeenanan ka midho dhalino. Maaha inaan nafaheena u samayno cudur daar aan waxba ka jirin oo ina tusa waxyaabo bada oo inaga hor istaaga yoolkeena sidaa darteedna sugno inta wax is bedelayaan. Maaha inaynu cabsano.
Waa run cabsida ayaa inagu ah laf dhuun gashay, jidgooyo ayay u gashay himilooyinkeena – tan waa inaan ka gudubno. Waa inaan ogolaano inaan guul daraysan karno basle ahayn inaynu dhabtii guul daraysanay. Imisaan kufnaa, hadana kacnaa. Waa sidaas tana.
Rumaynta riyooyinkeenu waa ahmiyadeena iyo beegsigeena dhabta ah. Si aan u gaadhno hadaba waa inaan la noolaano, wajahnona xaqiiqda kuna salayno riyooyinkeena xaqiiqda, aaminnona nafeheena.
Riyada xaqiiqda ku dhisani way fududahay rumaynteedu. Sidoo kale maskaxda waa inaynu ku haynaa in riyadeenu ay dhicisoobi hadaan diirada saarno adduun jacayl qudha oo hilmaamaano xikmada abuurteena.
Cabdinaasir Axmed X. Adam Afqalooc
Title: MAXAA KAA HORTAAGAN IN RIYADAADU KUU RUMOWDO.